अधिकांश आधुनिक कार विशेष Electropomp प्रयोग गर्नुहोस्। "Gazelle" मूल्य र गुणस्तर मामलामा यी उपकरणहरू को सबै भन्दा राम्रो को एक साथ सुसज्जित छ, त्यसैले यसलाई स्थापना रुचि राख्नुहुन्छ। एकै समयमा, मोटर चालकहरुलाई यस्तो यन्त्र हो र यसलाई के प्रयोग गरिन्छ कि अक्सर थाहा छैन।
इन्जिन भागहरु सञ्चालन समयमा गरम छन् जो को सर्वोत्कृष्ट ठंडा सुनिश्चित गर्न, एक विशेष Electropomp प्रयोग गर्दछ। "Gazelle" र अन्य कार मोडेल यस्तो प्रणाली, जो, आधारभूत बाहेक, अझै अन्य कार्यहरु को एक नम्बर प्रदर्शन गर्न सक्छन् सुसज्जित छन्:
वेंटिलेशन सिस्टम, वातानुकूलन र ताप प्रणाली मा हावा हीटिंग;
को रिसाइकिलिंग प्रणाली गठन जो ग्याँसहरु ठंडा;
स्वचालित प्रसारण प्रयोग काम तरल पदार्थ ठंडा;
को turbocharger मा हावा ठंडा।
तिनीहरूले के हुन सक्छ?
प्रभाव सुनिश्चित छ जसमा तरिका आधारमा, फरक Electropomp सेट गर्न सकिन्छ। "Gazelle" यस्तो उपकरणहरू विभिन्न मोडेल हुन सक्छ, तर सबै भन्दा साधारण निम्न छन्:
तरल। यस्तो प्रणाली तरल पदार्थ प्रवाह प्रयोग बढ्तै तातो इन्जिन घटक देखि गर्मी हटाउनका लागि प्रदान गर्दछ।
हवाई। एउटै यांत्रिक काम, तर Airflow प्रयोग गरेर।
संयुक्त। यो दुई अघिल्लो विकल्पहरू एकीकृत मा लक्ष्य लिएको छ।
आधुनिक कार मा अक्सर तरल Electropomp स्थापित। एक प्रणाली यस्तो मदत संग "Gazelle" वर्दी र प्रभावकारी ठंडा, साथै धेरै छैन हल्ला पनि धेरै मोटर चालकहरुलाई लागि महत्त्वपूर्ण छ, जो सुनिश्चित गर्दछ। किन भविष्यमा हामी यस्तो उपकरण को एक उदाहरण मा ठंडा प्रणाली को सञ्चालनको सिद्धान्त विचार गर्नेछौं छ।
संरचना को ठंडा सिस्टम को , वस्तुहरूको ठूलो संख्या सहित therein समावेश एकदम दुवै डिजेल र पेट्रोल इन्जिन लागि समान छ:
हीटर गर्मी एक्सचेंजर;
साथै, एक अपकेंद्र पम्प (Electropomp) कार मा स्थापित छ। "Gazelle" अन्य कार मा व्यापक छ जो आज सर्वाधिक लोकप्रिय यी उपकरणहरू को, एक संग सुसज्जित छ।
पनि लायक टिप्पण योजना आवश्यक तथाकथित ठंडा ज्याकेट समावेश भन्ने तथ्यलाई छ।
रेडिएटरको सुधार गर्मी स्थानान्तरण प्रदान गर्न, हावा को गर्म तरल स्ट्रिम शांत गर्न प्रयोग गरिन्छ, र, यो विशेष ट्यूबलर उपकरण संग सुसज्जित छ। सँगै प्राथमिक रेडियेटर संग अक्सर पनि यस्तो रेडियेटर रूपमा सहायक उपकरण, को स्थापना प्रदान EGR सिस्टम र कोमलता। उत्तरार्द्ध को स्नेहन सिस्टम मा तेल को तापमान को कमी सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिएको छ।
हीटर गर्मी एक्सचेंजर therethrough बित्दै जो हावा गर्मी गर्न प्रयोग गरिन्छ। जहाँ गरम कूलेंट इन्जिन बाहिरिन्छ ठाउँ मा यसलाई सामान्यतः स्थापित छ यो तत्व बढी कुशल संचालन सुनिश्चित गर्न।
तरल पदार्थ एक विशेष मा स्थापना गर्न पहल कारण तापमान गर्न मात्रा परिवर्तन को लागि क्षतिपूर्ति गर्न , विस्तार ट्यांक जसबाट भर्नु यसलाई माध्यम गरिनेछ।
यस तरल पदार्थ सामान्य प्रणाली मा circulates भनेर, Electropomp ( "Gazelle") यो स्थापित गर्न सकिन्छ। एक बेल्ट, एक गियर र अरूलाई अझै पनि एक अधिकता: यस्तो उपकरणहरू को विशेषताहरु फरक actuator लागि प्रदान गर्नुहोस्। इन्जिन केही मोडेल, turbocharged, को turbocharger शुल्क हावा को उचित ठंडा सुनिश्चित र नियन्त्रण एकाइ द्वारा जोडिएको हुन थप पम्प स्थापना गर्न लिइएको छ।
थर्मोस्टेट रेडिएटरको, जसद्वारा को भण्डारण अधिकतम तापक्रम मार्फत बित्दै कि तरल पदार्थ ठंडा को कुल रकम समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। थर्मोस्टेट को ठंडा ज्याकेट र रेडिएटर बीच राख्दै, सकेट माउन्ट लिएको।
दुई चरण तरल पदार्थ तापमान विनियमन को संभावना हासिल छ जो संग सुसज्जित एक विद्युत ताप प्रणाली संग एक थर्मोस्टेट, स्थापना गर्न अपनाए एक पर्याप्त शक्तिशाली इन्जिन मा। तरल तापमान 90 ° C गर्न घट्छ र सम्भव इन्जिन धडाका गर्न झुकाव कम whereupon तीन अलग अलग सञ्चालन स्थितिहरू लागि, यसको पूर्ण खोल्ने हीटिंग लगे एक विद्युत मोटर द्वारा प्रदान गर्दछ र पूर्ण लोड मा यसको डिजाइन मा यस्तो नियन्त्रणको लागि। अन्य अवस्थामा Electropomp ( "Gazelle") circulates जो तरल, तापमान विशेषताहरु 105 ° सी हुनुपर्छ
कसरी ठंडा सिस्टम गर्छ? को परिसंचरण बाटो को विवरण
काम ठंडा मुख्य रूप इन्जिन नियन्त्रण प्रणाली द्वारा प्रदान गरिएको छ। आधुनिक ड्राइव मा, अल्गोरिदम काम खातामा विभिन्न मापदण्डहरु लिन्छ कि एक गणितीय मोडेल को आधार मा लागू छ, र त्यसपछि अधिकतम सक्रियता अवस्था, साथै संरचनात्मक तत्व को काम सेट।
ठंडा तरल Electropomp ( "Gazelle") द्वारा प्रदान प्रणाली बाध्य परिसंचरण कारण, मार्फत प्रवाह गरिएको छ। गल्तीलाई को घटना मा यस्तो उपकरण को मर्मत अन्यथा इन्जिन चाँडै अत्यधिक तापमान वृद्धि कारण क्षतिग्रस्त गर्न सकिन्छ रूपमा, सकेसम्म बाहिर हुनुपर्छ।
यो उपकरण को सिद्धान्त यस्तो छ कि मार्फत "ठंडा ज्याकेट" को तरल पदार्थ चाल, मोटर ठंडा प्रदान र यसरी कूलेंट हीटिंग गर्दा। त्यो आफु प्रयोग प्रविधि निर्भर साथ वा मार्फत सार्न सक्छ।
तापमान आधारमा, तरल ठूलो वा सानो सर्कल भन्दा फैलाइएको छ। इन्जिन शुरू गरे पछि, उपकरण नै र therein स्थित कूलेंट दुवै एक कम तापमान छ। न्यानो तरल गति गर्न रेडियेटर मा प्राप्त छैन, एउटा सानो सर्कल सार्न थाल्छ।
ठूलो सर्कल रेडिएटरको मार्फत सिधै पहिले देखि नै छ साथ यो उत्प्रेरित गर्छ भनेर थर्मोस्टेट हीटिंग को प्रक्रिया मा, बिस्तारै खोल्न सुरु हुन्छ। आवश्यक छ भने, थप तरल पदार्थ पनि प्रशंसक हावा प्रवाह द्वारा cooled गर्न सकिन्छ।
फेरि मा Electropomp "Gazelle" VAZ-2114 को पूर्ण ठंडा पछि "ठंडा ज्याकेट" मा तरल पठाएमा, र यो चक्र इन्जिन सञ्चालन समयमा धेरै पटक दोहोर्याइएको छ।
किन अन्य कार पंप सेट?
को "Gazelle" बाट Electropomp योजना चाँडै बुझे जो र आधुनिक चालक अँगालेका छन् अन्य घरेलू कार, को एक पाहुना यसको स्थापनाका लागि प्रदान गर्दछ। चिसो मौसम को शुरू संग प्रत्येक व्यक्तिलाई कसरी शायद जो कोहीले सवारी चलाउँदा स्थिर गर्न चाहन्छ किनकी, जाडो आफ्नो "फलाम घोडा" तयार सोच्न थाल्छ। निस्सन्देह, हरेक घरेलू कार मा र VAZ-2107 मा आफ्नै ओवन सेट, तर यसको शक्ति अक्सर अभाव छ, र "Gazelle" बाट Electropomp तपाईं एकदम को ताप सिस्टम को दक्षता वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ।
के थप पंप दिन्छ?
को ताप सिस्टम को दक्षता वृद्धि निष्क्रिय छ - मुख्य कार्य, Electropomp ( "Gazelle") को लागि सेट गरिएको छ जो छ। यस्तो उपकरणको मर्मत कम प्राय आवश्यक छ, र यसको दक्षता कार को मानक ताप सिस्टम तुलनामा धेरै उच्च छ, त्यसैले यो सरल उपकरण आज धेरै व्यापक भएको छ।
nominally ओवन न्यानो हावा उड्ने निस्क्रियगर्दै र तातो मात्र आन्दोलन सुरू भएपछि सक्रिय भने, त्यसैले ठंडा प्रणालीमा वर्तमान तरल को राम्रो परिसंचरण छैन छ। पनि स्थिर जब VAZ-2109 मा "Gazelle" र अन्य यस्तै वाहन देखि Electropomp, ओवन देखि हावा को तापमान मा एक सकारात्मक प्रभाव पार्न कि जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु को एक धेरै छिटो आन्दोलन प्रदान गर्दछ।
धेरै मानिसहरू एक अतिरिक्त पंप को स्थापना नयाँ विधिहरू आफ्नो कार सुधार गर्न केही हालतमा प्रयास गर्न अर्को विचार kulibinyh विचार छ कि यो टिप्पण लायक छ, तर वास्तवमा त्यस्तो प्रविधिको प्रयोग बीएमडब्ल्यू र मर्सिडिज बेञ्ज जस्ता प्रसिद्ध कम्पनीहरु पहिले एक लामो समय को लागि अभ्यास गरिएको छ।
के सेट गर्न सकिन्छ?
केही उपकरणहरू को विदेशी निर्माताहरु सेट (उदाहरणका लागि, बश को कम्पनीको उपकरण छ) रुचाउँछु। तर धेरै Electropomp "Gazelle" थप सामान्यतः प्रयोग गरिन्छ। यो एकदम वाहन प्रदर्शन सुधार गर्न एउटा सानो रकम लागि अनुमति दिन्छ रूपमा यो अक्सर एकदम सकारात्मक, प्रयोग गर्ने मान्छे देखि यो उपकरणको बारेमा समीक्षा।
पम्प "Gazelle" एक मानक अपकेंद्र पम्प छ। सञ्चालन बेला ब्लेड मा तरल पदार्थ को प्रवाह प्रवेश मा एक निर्वात प्रदान गर्दछ र तरल पदार्थ पम्पिंग शक्ति बढ्छ जो केन्द्र, देखि बाह्य गर्न हालियो छ। यो "Gazelle" बाट स्थापित Electropomp को Wha मा केसिङ र प्ररित गर्नेवाला बीच एक धेरै ठूलो अन्तराल बाहिर हावा पम्प सक्दैन टिप्पण लायक छ।
पंप "Gazelevskie" धेरै फरक हुन सक्छ, र आफ्नो पहिलो फरक निर्माण को वर्ष छ। थप आधुनिक मोडेल धेरै कम कम्पन, र सिद्धान्त मा, नयाँ मोडेल को जडान Electropomp ( "Gazelle") तपाईं समस्या र समस्या धेरै देखि सुरक्षित हुनेछ। मुख्य समस्या, सबै भन्दा अक्सर यस्तो उपकरणहरू मा पाइएको - एक बरु अप्रिय परिणाम र मरम्मत को लागि आवश्यकता अग्रणी, आफ्नो पाठ्यक्रम हो। खुसीको कुरा, प्रक्रिया धेरै पसलहरूमा सजिलै झन् आधुनिक मोटर चालकहरुलाई द्वारा आज अभ्यास छ स्थापना जो "Gazelle", मा Electropomp सेवा प्रदान, अपेक्षाकृत छिटो र सस्तो छ।
के तपाईं साँच्चै उच्च गुणवत्ता उपकरण चयन गर्न र यसरी राम्ररी स्थापना प्रक्रिया हो, यसलाई न्यून पारिएको गरिनेछ टूटना को सम्भावना खर्च गर्न सक्षम छन् भने टिप्पण कि लायक छ।
कसरी स्थापना गर्छ?
अब कसरी "Gazelle" बाट Electropomp जडान गर्न बारेमा कुरा गरौं। तुरुन्तै यो प्रक्रिया एकदम मांग छ भनेर भन्न, त्यसैले तपाईं आफ्नो क्षमता मा विश्वास छैन भने, यो केही विशेषज्ञहरु सौंपन राम्रो छ।
थप Electropomp ( "Gazelle") स्थापना हुनुअघि (त तपाईं नयाँ खन्याउन भने क्षमता सफा हुन छैन,), कार जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु तल cooled सम्म प्रतीक्षा त्यसपछि कुनै पनि सफा कन्टेनर मा एकाइ देखि यो सकिन प्रयास ।
अब पम्प मा शीर्ष चार आत्म-ट्याप स्क्रू वोल्ट नट आदि खोल्नु र रबर गैसकेट सीलेंट चिकनाना। विधानसभा समयमा, स्क्रू सट्टा पंप पातलो लामो बोल्ट र पागल स्थापना गरिनु पर्दछ।
एक ब्रेक वा रुचाउने ट्यूब छोडेर - धेरै मान्छे सर्वश्रेष्ठ थप पम्प राख्न कहाँ सोच्न। मुख्य स्ट्रिम भित्र यो स्थापना गर्न - वास्तवमा जहाँ राखेँ हुनेछ, मुख्य कुरा कुनै फरक छ। हुनत यो यसको ताप सिस्टम को आधुनिकीकरण को संस्करण भएका मोटर चालकहरुलाई को बहुमत, यो कूलर हीटिंग एक नयाँ पम्प स्थापना गर्न सबै भन्दा राम्रो छ भन्दै बताए गर्नुपर्छ।
निर्धारण निम्न उपकरणहरुको एक द्वारा गरिन्छ:
संवर्धन बन्धन वशर तरल पदार्थ जलाशय;
माउन्ट मानक Shumkov मोटर प्लेट मा स्थापित;
ब्याट्रि नजिकै पिन।
सबै भन्दा साधारण माथि छलफल गरिएको अन्तिम विकल्प, जहाँ उपकरण तेर्सो ट्यूब पंप पक्ष ब्लक अवलोकन भनेर अवस्थित छ (यो फलाम जुवा पूर्व-विस्तार) छ।
जडान Electropomp लागि कुनै पनि सुविधाजनक स्थान मा बाहिर। कसैले कसैलाई स्थापित, को recirculation बटन राख्छ दर्पण को ताप, ब्लक SAUO सक्रियता चुलो र धेरै अन्य वस्तुहरू।
अब EGR वाल्व सेतो / निलो विच्छेद र निम्नानुसार पहेंलो / निलो तार त्यसपछि तिनीहरूलाई पुन: जडान:
सेतो / निलो टर्मिनल 85 रिले जोडिएको छ;
पहेंलो / निलो टर्मिनल 30 जोडिएको;
टर्मिनल 87 विद्युत तार संग संयुक्त छ;
निम्नानुसार स्थापनाको लागि सामान्य प्रक्रिया हो:
टाउको एकाइ को आउटलेट देखि तरल पदार्थ हीटर आपूर्ति छ जो मार्फत, र त्यसपछि यो तेर्सो बिजुली नाली जोडिएको छ असक्षम नली छ। नली को लम्बाइ एउटा सञ्चालनको यस्तो को कार्यन्वयनका लागि पर्याप्त छ, त्यसैले यो लायक छैन चिन्ता।
को ठाडो पाइप, दुई एस आकारको नली 2108 (वा अन्य उपयुक्त) जडान जो छ गर्न नली जडान गर्न, तिनीहरूले रेडियेटर र एक हीटर वाल्व बीच सानो घर मा अक्सर छन्। दोस्रो अन्त कहाँ उहाँले पहिले कर्मचारी जडान थियो ठाउँमा ब्लक स्तम्भ जोडिएको छ। अन्त मा, सबै Clamps, मुख्य कुरा सुत्छन् - एकाइ मा नाली प्लग कस गर्न नबिर्स।
सीमा मान जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु भरिएको, यो आन्तरिक दहन इन्जिन उत्तेजित गर्दछ र पूर्ण देखिने लिक लागि सबै उपकरण छ। त्यसपछि, विभिन्न कस पट्टियाँ देखि पंप र सम्भव लिक पटक पटक हटाउन सक्रिय। इन्जिन जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु स्तर को एक आधा घण्टा पछि सामान्य स्तर समायोजित छ।
यो संशोधन धेरै सन्दर्भहरू मोटर चालकहरुलाई द्वारा प्रमाणित, केवल सबै भन्दा राम्रो हातले नै देखाउँछ। को "Gazelle" पनि एक सानो तातो इन्जिन हावा स्टोभ देखि सुरु देखि पंप धेरै न्यानो जाने हुँदा, तर प्रक्रिया मा मिसिन जोडिँदा अनावश्यक हल्ला सिर्जना जो एक सानो सा र कम्पन हुन सक्छ।
यस्तो पम्प मात्र 0.25 mA, तपाईंले आफ्नो उपकरण चाँडै ब्याट्री निर्वहन गर्नेछन् बारेमा चिन्ता गर्न सक्दैन कारण जो खपत। यस उन्नयन धेरै मान्छे, उत्तरी क्षेत्रहरु बस्ने विशेष गरी ती उपयोगी हुनेछ। VAZ-2110 को लागि अतिरिक्त पंप को सट्टा जस्तै जो पनि सकारात्मक गुणहरू धेरै छन् LUZAR «टर्बो», पम्प उन्नत प्रदर्शन माउन्ट हुन सक्दैन।
त्यहाँ पनि कसरी नियमित चुलो काम गर्न धेरै अन्य विकल्प छ र अधिक फलदायी छन्। उदाहरणका लागि, केही मानिसहरू VAZ स्टोभ rework को पक्ष साथ र खुट्टा मा Airflow धेरै कुशल बन्न त, वा एक अतिरिक्त हीटर स्थापना गर्न। तर कुनै पनि मामला मा, एक अतिरिक्त पंप को स्थापना संग एक भेद सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो।
साधारणतया यस्तो आधुनिकीकरण को प्रयोग सानो घर भित्र तातो हावा को कमी देखि हिउँदमा कार मा लामो समय खर्च र दुःख गर्ने ती मानिसहरूको लागि सान्दर्भिक छ। त्यो बाँकी को मामला मा थप पंप उपकरण जो संग यो वातानुकूलन र इन्जिन शीतलन प्रणाली, पनि महत्त्वपूर्ण छ जो को दक्षता वृद्धि गर्न सम्भव हुनेछ स्तरवृद्धि गर्न किन छ। यो प्रविधि प्रयोग गरेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा यो शायद मानक कार मा पर्याप्त प्रदान गर्दछ, कार स्थिर छ र सार्न गर्दैन गर्दा एक व्यक्ति पनि एक समयमा कुशल ताप प्राप्त गर्न सक्ने छ।
TagAz S190: विनिर्देशों र फोटो
सुबारु म WRX एसटीआई ( "सुबारु सेकेन्ड") विनिर्देशों, मिलाउने, समीक्षा
कार लाइटर चुरोट मा हीटर: समीक्षा विशेषताहरु
मिल्स अनुहार। डिजाइन सुविधा र मिशन
अड्डा लागि सही lures चयन
म किंडरगार्टन मा आमाबाबुले मदत लागि मेरो कृतज्ञता कसरी व्यक्त गर्न सक्छौं?
रे Bradbury द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक - जादु शब्द
दबाइ "Alba": प्रयोग, वर्णन, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
कान छेड्नु कस्तो छ: उपास्थि घाइते वा छैन?
कति डिग्री को बियर र यसलाई के निर्भर गर्छ?